Heerka burburi Candy 419 Khiyaamada iyo tabaha - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Qishka nacnaca nacnaca / Heerka burburi Candy 419 Khiyaamada iyo tabaha
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Agoosto 4, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf
Weligaa ma la yaabtay sida ay u qoto dheer tahay baddu? Intee buu weyn yahay galaxgayaga? Caalamku intee buu le'eg yahay? Sida heerarka Candy Crush Saga ay u jiri doonaan? Waxaan ula jeedaa, ma aha in aynu wali wada gudbinay; dhab ahaan, inteena ugu badan ayaa ka danbeeya cutubka hadda jira. Dhinaca lagu daray, waxaa jira waxbadan oo intaas ka sii badan oo aan filayno. Kuwa iyagu wali ku xayiran heerarkii hore, waxaan u soo qaadnaa Heerka Candy Crush 419 Khiyaamada iyo tabaha.
Mararka qaar marka ciyaar la ciyaarayo, Waxaan la kulannaa heer nagu qaadata maalmo si aan u dhaafno. Laakiin taasi waa farxadda la dagaalanka in wax lagu kasbado shaqo adag kadib; waxay naga dhigeysaa mid dareem xoog iyo macaan. Kani waa kiiska Candy Crush Saga oo heerarka qaarkood ay ka dhigaan ciyaartoy in ay timaha u jajabiyaan jahwareer. Hagaag, runtii maahan, laakiin waxay dadka ka dhigaysaa mid xanaaq badan oo xanaaq badan. Ka fikir farxadooda markay ka gudbaan heerarkaas… qiyaaso.
Ujeedada Heerka Candy Burburinta 419 waa xoogaa dherer ah. Waa inaad soo aruurisaa 100 nacnac huruud ah, 6 nacnac duudduuban, iyo 2 bambooyinka midabka. Waxaa taas weheliya, Ciyaartoyda sidoo kale waa inay goolal dhaliyaan 18.000 Dhibco. Waa tan qabashada, badidooda xarunta waxaa kujirta dhaymo nacnac. Kaliya marka lagaa saaro nadiifinta waxaad heysataa goob ku habboon oo aad ka ciyaari karto.
Heerka burburi Candy 419 Khiyaamada iyo tabaha:
Wixii aan ka maqalnay, ciyaartoy badan ayaa ku qaatay maalmo dhamaadka inay ku dhammeeyaan heerkan laakiin way ku guul darreysteen inay sidaas sameeyaan. Waxaa jira qaab aan aragnay oo ay ku celinayaan ciyaartoy garoonka gudihiisa ku sugan, taasina waa inaysan abaabulaan ciyaarta ciyaarta. Laakiin hadaad u ciyaarto sida ku qoran tilmaamaha la soo sheegay, waan hubnaa inaad nadiifin doontid heerka isku dayga koowaad.
Ujeeddadaada koowaad waa inay ahaato inaad nadiifiso caqabadaha (baakadaha nacnaca) si arrimaha wax fudud looga dhigo oo ay kuu fudud yihiin. Iyada oo leh meel ku filan, waxaad abuuri kartaa nacnacyo badan oo gaar ah inta aad rabto isla markaana si fudud u nadiifi heerka. Ujeeddooyinkaaga waad gaari kartaa mar dambe markaad dhamayso nadiifinta gogosha xarunta.
That’s about it, is arag wiilasha marka dambe. Ilaa iyo markaa, macaan joog.